Oduu Galma Abbaa Gadaa Adaamaa irraa:-Waltajjii OPDOn qeerroo Oromiyaa irraa walitti qabameef – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Galma Abbaa Gadaa Adaamaa irraa:-Waltajjii OPDOn qeerroo Oromiyaa irraa walitti qabameef
Oduu Galma Abbaa Gadaa Adaamaa irraa:-Waltajjii OPDOn qeerroo Oromiyaa irraa walitti qabameef
Oduu Galma Abbaa Gadaa Adaamaa irraa:
Waltajjii OPDOn qeerroo Oromiyaa irraa walitti qabameef dhiyeessiite mataa duree “Qabsoo Dargaggoota Oromoo fi Ijaarsa Biyya Itoophiyaa jedhu irratti Guyyaa har’aa ibsaa erga laatame boodaa gaaffiwwan hedduutu qeerroo irraa ka’a ture achi keessaa mursii kunooti
1.Dhabbaani Oromoof qabsa’ee ABOtti waggaa hedduuf qabsoo Oromoof ABO gargarii baasuu hin dandeessaan.
2.DhDUOn dhaaba oromoo miti haala mijeessituu TPLFtti malee
3.OPDOn ummata oromoo keessa miseensa tokkollee kan hin qabne akka ta’e beekaa garuu ummatni Keenya OPDO keessa nama muraasa ni qabna Fkn.Lammaa Magaarsa fi fakkatoota isaa ,kanaaf maqaa OPDO jedhu kana booda dhaga’u nun barbaachisu.
4.Osoo lammiin Keenya moyaalletti du’a jiru, Liyyuu poolisiin fixxaa jirtu, medrockiif jedhe Gujiin du’a jiru waltajjiirra ta’u hin barbaadnu achi deemna.
5.Waraani daangaa eegu dhiise magaalaa keessatti ilmaan oromoo dorsiisu,Shamarranii keenyaa gudeddaa jiru,nuu sammaa jiruu nurraa haa ka’u.
6.Dargaggoota Oromoo meeshaa hidhane falmuu barbaanna. Adeemsii Abbaa Torbee sirriidha komatamu hin qabu isaa nuu ajjeesse namni seeraatti dhi’eessuu yoo dhibbee ofi keessaa kaasuun dogoggora hin qabu ammayyuu bakka hundatti nuu balachuu qaba.
7. LYM,seera shorikeesuumma Parlaamaa Itoophiyaan ka’ame nuraa ka’u qaba.
8.ergamtootni Wayyaanee OPDO tahuudhaan kanneen lammii Keenya saman samisiisan,ajjeessanii ajjeesisan.seeratti dhiyaachu qabu Fedeeralaa hanga gandatti Fkn.A/Duulaa, Asteer maammoo, Muktaar, Kumaa,……. jechuun OPDO wajiin mormatti wal qaba jira. Qeerroon oromoo abdiin Oromiyaa.
Caalaa Hayiluu Abaataa irraa
Dubbii hima OPDO Dr. #Negeri_Lencho Moo #Addisu_Arega_Kitessadha?ilmaa OPDO Abbaa duulaa Hereggaa?kijibduu ilaala.
OMN: Haala 1991 fi Ammaa Ilaalchisee (LIVE) Caamsaa 26, 2018